Mölndal waxeey taajir ka tahay dabiicad iyo dhaqan, waxeey lee dahay adeegyo iyo xariir sii fiican uu dhisan. Waxaa usii dheer soo bandhigid madadaalo iyo ganacsi. Mölndal waxaa laga helaa in kasto oo loogu tala galay da' kasto. Dhawanaanshaha tooska ee Mölndal la lee dahay degmda Göteborg, waxeey taasi oo kale keeneeysaa fursad hoowlo laga heli karo lee magaalo weeyn.
Dadka Mölndal badankood waxeey daganyihiin in ka tirsan xaafadahaMölndal, Kållered iyo Lindome. Ku dhawaad in ka mid ah labo markii loo qeeybso sadax waa dhismo ka kooban guriyaal yar iyo guriyaal la gato. Hal qeeyb lee soo haray ayaa ah guriyaal kiro. Isku darka dhismaha guriyaasha la kireeysto ee cusub oo yar iyo maadama ee Mölndal tahay degmad soo jiidasho uu leh in la dago waxeey keeneysaa in guriyaasha la kireeyste ee banaanaado ee yihiin kuwo la doonaayo. Dadk badan oo ka shaqeeyo Mölndal sido kale waxeey uu safraan degmooyin kale.
Shirkada ugu weeyn ee guriyaha waa Mölndalsbostäder iyo Förbo. Mölndalsböster waxeey ku xiran tahay Boplats Göteborg oo ka dalaal ah guriyaasha ka banaanaado in badan oo ka mid degmooyin ku hareero Göteborg. Sideeda kale Mölndal mal leh xafiis dalaal ee gaar ah. Adiga ayaa si gaar ah uu la xariireeysid milkiyaasha guriyada iyo guri kireeyaha si aad uga ogaato habka loo istaago safkood. Cinwaanada waxad ka heleeysaa Eniro.
Luuqadaha yurub ma ahane waxaa kale oo jiro luuqadaha sorani, carabi, daari, afka iraan iyo soomaali.
Mölndal waxaa ku taalo ku dhawaad 300 oo urur oo aad ka heli karto warbixin ku saabsan diwaanka-ururka magaalada Mölndal. Ururada ajnabiga waa yaryihiin laakin dad badan oo ajnabi ah ayaa ku hoowlo-urureed ku leh Göteborg. Sido kale Göteborg waxaa ku yaalo ururo badan oo kala duwan, ku diimeedna waa ka jiraan.
Agagaarka bartamaha Mölndal waxaa ku yaalo xafiiska bulshada iyo xafiiska shaqada. Si aad xariir shakhsiyeed ula yeelato sanduuqa ceeymiska iyo xafiiska hey'adda canshuraha waxaad tagtaa Göteborg. Sido kale waxaa halkaask u yaalo jiheeynta-qaxootiga Göteborg oo ku caawiyo in ee kulmaan iswiidhishka iyo ajnabiga cusub iyo qaxootiga.
Qofka hami uu hayo dhaqamada waxaa jiro oo ka mid ah dhowr maktabad, goobta dhaqanka Möllan oo leh shaleemo, mutxafka Mölndal iyo Sarta Gunnebo oo halkaas xilliga xagaaga lagu qabto ruwaayado. Haddii aad jeceshay in aad daawato isboorti iyo in aad ciyaarto waxaa jiro in ku filan oo goob-isboorti gudaha degmada. In badan ayee ku yaalo xaafada Åby, oo halkaas xataa ee ku taalo Åbytravet iyo goob-dabaal. Sido kale Mölndal waxeey lee dahay in ku filan oo goobo lagu wareego loogu tala galay qofka hami uu hayo hawo qaadashada.
Dukaamo cunta waa ku yaalin inta badan oo ka tirsan xaafadaha. Haddii kale hoowlaha-dukaamed waxeey uu badan yihiin Kållered Köpstad, oo waxyaalaha ku yaalo ka mid yahay IKEA iyo bartmaha Mölndal. Bartamaha agtiisna waxaa ku yaalo Gacan-labaadka Mölndal. Bankiyada weeyn waxeey xafiis ku lee yihiin Mölndal.
Wax kasto aad uu baahan tahay in aad ka ogaato xanaanada caruurta ee degmadeed iyo kuwa madaxabanaan waxaad ka heleeysaa bogga magaalada Mölndal Dugsi xanaano iyo xanaaneeyn carur iyo guriga maalmeedka reereed, xanaanyaasha maalinta ee caruurta.
Warbixin ku saabsan iskuulada degmadadeed waxeey ku jiraan bogga magalaada Mölndal ee dugsiyada hoose, iyo midka dugsiyada sare. Bartamaha Mölndal waxaa ku yaalo dugsi madaxbanaan ee fasalada 0-9, Dugsiga Montessori Kvarnhjulet.
Waxbarashada dadka waa weeyn ee degmadeed waxeey jirtaa ayadoo habab kala duwan, waxaa ka mid iswiidhishka loogu tala galay ajnabiga. Haddii aad dooneeyso in aad dhigato waxbarsho jaamacadeed waxaad tageeysaa Göteborg ama Borås.
Mölndal waxaa ku yaalo isbitaalka Mölndal oo ah qeeyb ka mid ah qeeybo daryeelo ee kala duwan oo ka tirsan Isbitaalka jaamcadeed ee Sahlgrenska (SU). SU waa isbitaalka gobolka ayuu yahay dad badan oo degan Göteborg, waxeeyna aqoon-xirfad uu lee yihiin in ee sameeyaan daryeelada badankood ee ka tirsan daaweeynta iyo nuuca dimirka. Sido kale SU waxaa ku tirsan isbitaalka caruurta iyo dhalinyara Boqorada Silvias. Daryeel degdeg markii ee ku saabsan tahay waxaa tageeysa qeeybta ka mid ah SU oo aad adiga uga baahida uga qabto. Qeeybaha degdega oo dhan halkaan aad ka heleeysaa.
Sido kale Mölndal waxeey lee dahay soo bandhig weeyn ee qeeybaaha ku jiro daryeelka gobolka Göteland, närhälsan. Gal bagooda, ka raadsana daryeelka saxda. Sido kale waxaa kjiro ruggag caafimaad oo madaxbanaan. Daryeelka ilkaha waxuu jiraa nuuc daryeelka ilkaha ee dadweeynaha ah iyo qabilaado madaxbanaan oo aad ka heli karto eniro.se.
Markii aad la kulmeeyso qof uu shaqeeyo magaalada Mölndal waxaad xaq uu lee dahay in aad fahamto waxa la sheegay iyo waxa lo qoray. Taasi waxaad uga baahnaa kartaa caawinaad turjumaan. Sido kale isla taasi weey khuseeysaa qofka leh dhawac culus ee dhanka maqalka iyo hadalka.
Gaadiidka Västra Götaland oo dhan waxaa ka masu'ul ah Västtrafik. Mölndal waxeey lee dahay gaadiid dad weeyne oo sii fiican uu dhisan, gudaha degmada iyo midka ku socdaba degmooyinka kale iyo qeeybaha kale ee dalka. Maxadada Mölndal waa magaalada meesha iskaga xirto basaska, tareemada magalooyinka iyo tareemada. Sido kale waxaa halkaas maalintiiba marar badan istaago tareenka konfurta ee uu socdo Köpenhamn.
Bogga magaalda Mölndal, qeeybta ka hooseeyso Shirkadeeye waxaad ka heleeysaa inta badan oo aad uga baahan tahay bilaabid howl ganacsi ama ka wadideeda gudaha Mölndal. Sido kale magaalada Mölndal waa shaqo dhiibe weeyn oo leh ku dhawaad 5000 oo shaqaale. Sido kale Samfalayaasha Mölndal waxaad ka noqon kartaa qof sir xur (lacag la'aan) ka sameeyo howlo kheeyri ah oo ka howl galo meelo ee dad ku kulmaan.
Specialpedagog , Eklandaskolan 100% Specialpedagog
Två socialsekreterare till Enheten för Ekonomiskt bistånd Socialsekreterare
Socialsekreterare till Mottagningsgruppen - enheten för ekonomiskt bistånd Socialsekreterare
Vi söker kock till Lackarebäcksskolans kök. Kock, storhushåll
Homepartysäljare – Heminredning ZELECTED BY HOUZE AB Hemförsäljare
Försäljare med eller utan erfarenhet i Mölndal. Fast lön + provision. Hemförsäljare
Fritidspedagog / Grundlärare fritidshem till Eklandaskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Erfaren miljökonsult till Profu i Göteborg Miljöingenjör
Jobba direkt efter studenten! Telefonförsäljare
HR Specialist IT - kompetens HR-specialist/HR-adviser
Truckförare till Adecco Truckförare
Elektronikkonstruktör till Preh Elkrafttekniker
Hemglass i Göteborg söker Säljande förare! Utesäljare
Ebba 8 år , personlig assistent Personlig assistent
Bilvårdare / Rekondare Bilrekonditionerare
Förskollärare till Rävekärrs förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Vi söker ytterligare en förskollärare till nybyggda Stallbackens Förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Supplier Development Engineer Inköpsingenjör
Order Support Beställningskontorist
Det perfekta extrajobbet finns hos Konradssons Kakel Butikssäljare, fackhandel
Bogga 1 ee ka mid ah 264
Göteborg 10 minuter (från centrum till centrum)​​
Borås 45 minuter (från centrum till centrum)